Mashiinka Cadaadiska Mashiinka Xaraarada Mashiinka Sare
Bogga ugu weyn / Codsiyada / Kuleylka kuleylka / Kuleylka Kuleylka Kuleylka Kuleylka ah
Category: Kuleylka kuleylka Tags: soo iibso kuleyliyaha kuleylka kuleyliyaha, kuleylka kuleylka, diirinta induction, kululeeyaha kuleylka kuleylka ah, habka wasakhda qabatinka, dusha sare ee induction tempering, silig bir xanaaqa, xanaaqa dusha sare, kululeeyaha kululaynta, dulqaad, wasakhda qalabka induction, habka xanaaqa, silig indho-indheyn
Induction steel silig wasakhda ah Codsiga Procee
Waa maxay dabcinta kacsiga?
Dabeecadda is-beddelka waa geedi socodka kuleylka ee hagaajinaya aaladaha farsamada sida adkaanta iyo qulqulka meelaha shaqada ee horay loo adkeeyay.
Waxaan hubineynaa tayo sare, soocelin deg deg ah, adeegga macaamiisha oo wanaagsan, iyo qiimeyn tartan ah.
HLQ waa hogaamiye warshadaha daaweynta kuleylka induction ee bixiya adeegyo kala duwan oo lagu daaweeyo kuleylka, oo ay ku jiraan xanaaqa induction, Shiinaha. Dabeecadda Induction waa habka daaweynta kuleylka ee sida caadiga ah la sameeyo ka dib marka geedi socodka qallafsanaanta indha-indheynta la dhammeeyo. Waxaa lagu sameeyaa heerkul hoose oo ka hooseeya habka qallajinta indha-indheynta si loo gaaro kala duwanaansho adag oo la doonayo ama lagu daro adkeynta qaybta adoo kordhinaya duleelka. Dareemida induction ee birta sida caadiga ah waxaa lagu sameeyaa mawjadyo hoose si ay u soo saaraan natiijooyin ilbiriqsiyo la mid ah codsiyada xanaaqa foornada oo caadi ahaan saacado qaata.
Kuleylinta kuleylka ayaa lagu dabaqi karaa geeddi-socodka isdaba-joogga ah ee siligga siligga ah ee lagu quudinayo iyada oo loo marayo isku-xirnaanta induction ee xawaaraha wax soo saarka.
Waxyaabaha: Silig bir ah 3mm ilaa 12mm dhexroor
Heerkulka: 1922 ºF (1050 ºC)
Joogtaynta: 90 Khz
Qalabka kuleylka kuleylka: DW-UHF-60 kW, 100 kHz nidaamka kuleylka induction, oo ku qalabaysan mashiinka shaqada fog oo ka kooban siddeed 1.0 μF capacitors wadar ahaan 2 μF
- Seddex kuleyl oo kuleyliyaha kuleylka ah oo loogu talagalay loona sameeyay si gaar ah arjigan si loo daboolo xarkaha siligga
Habka Cadaadiska Induction:
Saamiyada siligga waxaa lagu quudiyaa afartan-wareeg oo heel ah oo qiyaas ah 6 mitir / daqiiqad, iyadoo la gaarsiinayo heerkulka la doonayo si loo saameeyo hannaanka xanaaqa 20 la mid ah oo xarig ah oo xarig ah ayaa loo adeegsadaa dhexroorka siligga ugu weyn
dayactirka loo baahan yahay ee 6 khadadka kaydka kaydka ah ee foornada gaaska ku shaqeeya ee leh kuleylka niyadjabka leh ee wareejinta fiilooyinka dhexroor yaryar. Induction-ka wuxuu ubaahan yahay 50% tamar kayar wuxuuna yareeyaa raadadka xariiqda wax soosaarka 90%
Natiijooyinka / Faa'iidooyinka Kuleylka induction waxay bixisaa:
- si toos ah ugu kululee siligga, adiga oo badbaadinaya tamarta iyo waqtiga
- dhexgalka fudud ee khadka wax soo saarka, hagaajinta wax soo saarka
- xakamaynta saxda ah ee kuleylka
- xitaa kuleylka kuleylka siligga dhexdiisa
Dabeecadda soo-saarista ayaa si ballaaran loogu shaqeeyaa warshadaha baabuurta si loo xakameeyo qaybaha dusha sare ee adag sida fallaadhaha, baararka iyo kala-goysyada. Nidaamka waxaa sidoo kale loo adeegsadaa warshadaha tuubbada iyo tuubbada si loo xakameeyo shaqooyinka adag ee adag. Dabeecadda ku-shubista mararka qaarkood waxaa lagu sameeyaa saldhigga qallafsanaanta, marar kalena mid ama dhowr saldhig oo xanaaq badan.
Maxaad u isticmaashaa xanaaqa indho-indheynta?
Nidaamkayaga xannibaadda indha-indheynta ayaa si dhakhso leh u dhaliya natiijooyin. Ku xumeynta birta adag waa shaqo waqtiga iyo heerkulka labadaba. Dabeecadda ku-shubista induction waxay isticmaashaa waqtiyo kuleyl ah oo gaagaaban (badanaa ilbiriqsiyo keliya) iyo heer-kulka sare si ay u soo saaraan natiijooyin u dhigma daaweynta xanaaqa foornada oo badanaa u baahan saacado. Dareemida ku-shubista ayaa lagu samayn karaa dhammaan qaybaha adag. Natiijadu waa qayb ka mid ah adkaanta, ductility iyo xoogga saameynta.
Faa'iidada ugu weyn ee diirinta induction waa xawaare. Kala-saaridu waxay xanuujin kartaa shaqooyinka daqiiqadaha, mararka qaarkood xitaa ilbidhiqsiyo. Dabeecadda foornada waxay caadi ahaan qaadataa saacado. Iyo, sida kuleylka indha-indheynta uu ugu habboon yahay isdhexgalka qadka, waxay yareynaysaa tirada qaybaha ka kooban geedi socodka. Dabeecadda qabatinka ayaa sahlaysa xakamaynta tayada shaqooyinka shaqsiyadeed. Xarumaha dabeecadaha isdhexgalka ee isku dhafan ayaa sidoo kale badbaadiya meel qiimo leh.
Kuleylka kuleylka kuleylka iyo birta birta ah ee cinwaanka kulul